သင့်၏အံသွားများကိုကာဗွန်ဖြင့်တက်ကြွစွာဘယ်လိုဖြူစင်အောင်လုပ်နည်း - AFRIKHEPRI
ကြိုဆို လှပ FASHION
Eထို့အပြင် activated မီးသွေးသို့မဟုတ် activated မီးသွေးဟုလည်းခေါ်, ဟင်းသီးဟင်းရွက်မီးသွေးဟင်းသီးဟင်းရွက်အော်ဂဲနစ်ပစ္စည်းများကာဗွန်ထုတ်လွှတ်မှုကနေရရှိလာတဲ့အနက်ရောင်အမှုန့်ဖြစ်ပါတယ်။ အလွန်စုပ်ယူနိုင်သောဤဒြပ်ပစ္စည်းသည်၎င်း၏မျက်နှာပြင်နှင့်ကပ်လျက်တည်ရှိနေသောအဆိပ်အတောက်အားလုံးကိုဖယ်ထုတ်ခြင်းနှင့်ခန္ဓာကိုယ်မှစုပ်ယူခြင်းမရှိခြင်း၏ထူးခြားချက်ရှိသည်။ မီးသွေးသည်သွားများဖြူဖွေးစေရန်သဘာဝနည်းလမ်းဖြစ်သည်။
သွားလယ်ကွင်းတွင်၎င်းသည်၎င်း၏အဖြူရောင်ဖြာနေသောဂုဏ်သတ္တိများကြောင့်ကျော်ကြားသည်။ သွားအတွက်မီးသွေးအမှုန့်သည်အမှုန်အမွှားများကိုပွတ်တိုက်ပြီးသွားများကိုစုပ်စေသောအရာများ (အထူးသဖြင့်ကော်ဖီ၊ လက်ဖက်ရည်နှင့်ဆေးရွက်ကြီး) ကိုစုပ်ယူသောအမှုန်များဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားသည်။ အသက်ရှူခက်ခဲတာကိုတိုက်ထုတ်ပေးတယ်။
သွားအဖြူရောင်နှင့် ပတ်သက်၍ အုန်းသီးမီးသွေးသည်အထူးသဖြင့်အပေါက်ငယ်များရှိသောကြောင့်ဓာတ်ငွေ့များ၊ အဆိပ်နှင့်သေးငယ်သောအမှုန်များကိုပိုမိုထိရောက်စွာစုပ်ယူနိုင်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ အထူးသဖြင့်ပြာမှဟင်းသီးဟင်းရွက်မီးသွေးထက် ၂၅ ဆပိုမိုစုပ်ယူနိုင်ပြီးပိုမိုထိရောက်သည်။
ဒါဟာသာယာသောထုတ်ကုန်သုံးစွဲဖို့အောင်လည်းမရှိ, အရသာသို့မဟုတ်အနံ့ရှိပါတယ်, နှင့်၎င်း၏ဝိသေသအနက်ရောင်အရောင်လက်မဆေးပျောက်ကွယ်သွားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
အစာခြေရောဂါများကုသမှု, အထူးသဖြင့်ဝမ်းလျှော, ဖောင်း, လေသို့မဟုတ်အူသိမ်အူမမှန်
အထူးသဖြင့်လေးလံသောသတ္တု၊ ကလိုရိုက်၊ ပိုးသတ်ဆေး၊
Kalkaire ယူကေ - သွား Whitening မီးသွေး - သွား Whitening သွားတိုက်ဆေး - သွားတိုက်ဆေးစိန်ကြွေထည်မီးသွေး - သွားသွားမီးသွေး - ချက်ချင်း Whitening သွားတိုက်ဆေး - Mint
1 €ကနေ 7,49 အသစ်
€ 7,49 ကိုဝယ်ပါ
ဇူလိုင်လ 14, 2020 10:42 pm တွင်၏အဖြစ်
ထို့အပြင်လူထောင်ပေါင်းများစွာသည်တက်ကြွသောကျောက်မီးသွေးအသုံးပြုမှုကိုအဘယ်ကြောင့်အသုံးပြုကြသည်ကိုရှာဖွေပါ။ ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုက်ဓာတ်ငွေ့၏အကျိုးကျေးဇူးများနှင့်၎င်း၏သုံးစွဲသူများ၏ပါးစပ်ကျန်းမာရေးအပေါ်အပြုသဘောဆောင်သောအကျိုးသက်ရောက်မှုများအကြောင်းသင်ကြားဖူးမည်မှာသေချာသည်။ ယခုသင်သည်ဤအရည်အသွေးမြင့် Kalkaire သွားတိုက်ဆေးနှင့်အတူ၎င်း၏အကျိုးကျေးဇူးများအားလုံးကိုရှာဖွေတွေ့ရှိနိုင်သည်။
သင့်ရဲ့ထိရောက်မှုကိုကာကွယ်ခြင်း! သွားများကိုတောက်ပ။ အဖြူရောင်နှင့်ကျန်းမာစွာထားပါ။ အလွန်ကောင်းမွန်သောပါးစပ်သန့်ရှင်းမှုကိုခံယူပါ။ ဤအဆင့်မြင့်ဖော်မြူလာသွားတိုက်ဆေးသည်သင်၏ပါးစပ် pH ကိုဟန်ချက်ညီစေသည်၊ ပြားနှင့်အစွန်းအထင်းများကိုဖယ်ရှားပေးသည်။ သို့သော်အခေါင်းပေါက်များနှင့်သင်၏သွားဖုံးကိုအကျိုးသက်ရောက်နိုင်သောရောဂါများဖြစ်ပေါ်လာခြင်းကိုကာကွယ်ပေးသည်။ ၎င်း၏အကျိုးကျေးဇူးများစာရင်းမှာ အရမ်းကြာ
သန့်စင်ပြီးသန့်ရှင်းတဲ့ချိုင့်များအတွက်! အလားတူထုတ်ကုန်များစွာနှင့်မတူဘဲကျွန်ုပ်တို့၏သွားတိုက်ဆေးသည်အနက်ရောင်ရှိသည့်ကာဗွန်မှအညစ်အကြေးများကိုစုပ်ယူနိုင်အောင်မြှုပ်ပေးသည်။ သင်၏သွားများသည်သူတို့၏ကျန်းမာရေးနှင့်အစွမ်းသတ္တိအားလုံးကိုပြန်လည်ရရှိသည်သာမကသင်၏သန့်ရှင်းသောအကျိုးသက်ရောက်မှုကိုလည်းခံစားရလိမ့်မည်။
သာယာသောအရသာနှင့်သဘာဝအင်ဂျင်နီယာများလက်ထပ်ခြင်း! ကျွန်ုပ်တို့၏အသက်သွင်းထားသောမီးသွေးသွားတိုက်ဆေးတွင်သဘာဝအော်ဂဲနစ်ပါဝင်ပစ္စည်းများဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားသည်။ ၎င်းတွင်ဖလိုရင်းသို့မဟုတ်ပါအောက်ဆိုဒ်၊ အရောင်ချွတ်ဆေး၊ သကြား၊ triclosan သို့မဟုတ် SLS တို့မပါဝင်ပါ။ တနည်းအားဖြင့်၎င်းသည်လုံခြုံစိတ်ချရပြီးနေ့စဉ်အသုံးပြုရန်သင့်တော်သည်။
100% အာမခံထားသန့်စင်နှစ်သက်ပါရန်! သင်၏သွားတိုက်ဆေးအသစ်ကိုသင်နှစ်သက်မည်ဟုယုံကြည်ပြီး၊ ၎င်းသည်အရသာရှိပြီးအရသာခံ။ သင်၏ပါးစပ်သန့်ရှင်းမှုကိုအလွန်ထိရောက်စွာတိုးတက်စေလိမ့်မည်။ သင်အပြည့်အဝမကျေနပ်ပါကသင့်အားအပြည့်အဝပြန်လည်ပေးဆပ်မည်ဟုကျွန်ုပ်တို့ကတိပေးထားသည်။
အဘယ်ကြောင့်အာဖရိကန်နှင့်အာဖရိကန်အမေရိကန်များကို“ ဘယ်သောအခါမျှဘယ်သောအခါမျှမပျက်ပြားစေရ” ကဲ့သို့အဘယ်ကြောင့်အမြဲတမ်းထိခိုက်ပျက်စီးစေသနည်း။